Maybelline New York Dream Satin Liquid Foundation (30ML) 01 | Buy online | SHOP.COM.MM
Maybelline New York Dream Satin Liquid Foundation (30ML) 01
ခုနောက်ပိုင်း foundation ဆိုရင် Maybelline က Dream Satin ပဲသုံးဖြစ်တယ်။ ညီမမျက်နှာမှာ အရင်ဝက်ခြံတွေကြောင့်အမှာရွတ်လေးတွေရှိနေတော့ ဒါလေးအောက်ခံလိမ်းလိုက်ရင် ဖုံးသွားတာအရမ်းကြိုက်တယ်။ မိတ်ကပ်က ထူလည်းမထူဘူး။ အကြာကြီးခံတယ်။ မနက်ရုံးသွားထဲကလိမ်းသွားတာ ညနေရုံးဆင်းတဲ့ထိမပျက်ဘူး။ Read more Hide
Poe Yu San
Maybelline ရဲ့ liquid foundation ကိုသုံးရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ မျက်နှာကိုနူးညံ့ချောမွေ့စေပြီး တစ်နေ့ကုန်ခံပါတယ်။ Read more Hide
Maybelline ကတော့ အကြိုက်ဆုံး brand ပါပဲ
လိမ်းထားပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ အဆီပြန်လာတာမျိုး၊ ချွေးထွက်ပြီး ပျက်သွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ သဘာဝအတိုင်းလှနေစေတဲ့ foundation ဖြစ်တဲ့အတွက် သုံးရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ Read more Hide
သိပ်ခိုက်သွားပြီ Dream Satin လေးရယ်
Val ကမိတ်ကပ်ထူတာမကြိုက်တော့ ဖောင်ဒေးရှင်းဝယ်ရင်အဆင်ပြေတာရှားပါတယ်။ ဒီ foundation က လိမ်းထားမှန်းမသိသာဘဲ တကယ့် flawless look ပေးတော့ Val နဲ့အံကိုက်ပေါ့။ နောက်တစ်ခုက long lasting ဖြစ်တယ်။ မနက်ကလိမ်းထားတာ ညနေ ၄ နာရီလောက်ထိ touch up လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပဲစွဲသုံးသွားတော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ Read more Hide
Dream Satin - Air Whipped Liquid Foundation from Maybelline provide ultra-blendable, comfortable feeling texture and air-brushed, poreless finish. Air-whipped liquid provides perfecting coverage for 100% pore-less skin and full yet lightweight coverage. Satin perfect, luminous finish are advantages. It won’t clog pores and is suitable for sensitive skin. Oil-free, fragrance-free, tested under dermatological control. Apply smoothly and evenly to your face and blend with your fingertips..This product is available now at shop.com.mm online shopping mall.
Dream Satin - Air Whipped Liquid Foundation - 01
Specifications of Dream Satin Liquid Foundation (30ML) 01